फेक आईडीबाट चरित्रहत्या गरेको भन्दै नेतृ लामा पुगिन प्रहरीको शरणमा ! – Todays Nepal
फेक आईडीबाट चरित्रहत्या गरेको भन्दै नेतृ लामा पुगिन प्रहरीको शरणमा !
By टुडेज नेपाल	 Last updated Jun 7, 2018
नेकपा सांसद एवम् अनेरास्ववियु अध्यक्ष नविना लामाले पेट्रालियम पदार्थको मूल्य बृद्धिको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो चरित्रहत्या गर्ने काम गरिएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी गरेकी छिन्। आफ्नो नक्कली फेसबुक आइडी बनाएर अनावश्यक जभाभावी लेखी त्यसको ‘ स्कृन’ बनाएर आफ्नो बेइज्जत गरिएको उनको आरोप छ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धिमा केही नबोलेको भन्दै उनीमाथि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ। केहीले नक्कली फेसबुक आइडी बनाएर जभाभावी च्याट गरेर त्यसको फोटो राखी प्रचार गरीरहेको लामाको भनाई छ। त्यसविरुद्ध साइबर क्राइम मुद्दामा आफुले छानबिनका लागि प्रहरीलाई आग्रह गरेको उनले बताइन्।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धिका लागि आपूर्ती मन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादबलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाइसकिएको उनको भनाई छ। तर, राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा केही व्यक्तिहरुले आफ्नो चरित्र हत्याको प्रयास गरेको लामा बताउँछिन्।
यस्तो आयो जापानमा विदेशी कामदार बढाउने जापानीज सरकारको योजना
श्रीमानको अपहरण, आफुलाई दोष समेत लागेको सम्झिदै भावुक बनिन बिपना